केपी ओलीले अध्यक्ष बनेको २ दिन नबित्दै ९१ बर्षिया भद्रकुमारी घलेको यस्तो कुराले रसाए लाखौं एमाले नेता कार्यकर्ताहरुका आखाँ, के भनिन त्यस्तो ? – Points Nepal
केपी ओलीले अध्यक्ष बनेको २ दिन नबित्दै ९१ बर्षिया भद्रकुमारी घलेको यस्तो कुराले रसाए लाखौं एमाले नेता कार्यकर्ताहरुका आखाँ, के भनिन त्यस्तो ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८ समय: ६:१८:५७
पूर्वमन्त्री एवं समाजसेवी ९१ बर्षिया भद्रकुमारी घले नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी ओलीले सानदार मत ल्याएर विजयी भएकोमा चौपट्टै खुशि भएकी छिन् ।
विगत लामो समय देखि एमाले अध्यक्षको पक्षमा बोलेर चर्चा कमाएकी घलले अध्यक्षमा ओलीले प्राप्त गरेको मत र सानदार मतका कारण आफु धेरै नै हर्षविभोर भएको बताएकी छिन् । ओलीले जित्दा आफैँले जितेको भन्दा खुशि महसुस भएको उनले बताएकी छिन् ।
ओटीभी नेपाल डटकम सँगको विशेष कुराकानीमा पूर्वमन्त्री घलले अब ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाइ मत ल्याएर फेरी सरकारमा फर्कने ठोकुवा गरेकी छिन् । आफ्नो सदासर्वदा साथ र आर्शिवाद ओलीलाई रहको पनि उनले बताइन् ।
कुराकानीको क्रममा घलेले अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी भिम रावललाई पनि गाली नगर्ने बताइन । म भिम रावलको बारेमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्न तर रावललाई आफ्नो औकात कति भन्ने कुरा राम्रो सँग थाहा भयो होला अब उहाँले अझै जिम्मेवार र परिपक्क भएर मनजित्ने गरि काम गर्नु पर्छ । घलेले भनिन् ।
कुराकानी अवधीभर ओलीको जीतले औधी खुशी देखिएकी घलेले ओली व्यक्तीले जितेर खुशी भएको होइन अब सम्वृद्ध नेपाल सुखि नेपाली बन्ने ढोका खुल्छ भनेर आफु खुशि भएको बताइन् । गतिलो नेता नजन्मीएकै कारण आज सम्म देश पछि परेको भन्दै देश विकास गर्न सक्ने नेताको रुपमा आफुले ओलीलाई विश्वास गरेका उनले बताइन ।
ओलीले जितेको खबर सुन्ने बेला सम्म आफुले राम्रो सँग खाना पनि नखाएको र राम्रो सँग निदाउँदा पनि ननिदाएको पूर्वमन्त्री घलेले बताइन् । ओलीले फराकिले मतान्तरले जितेको भन्ने समाचार सुन्ने वत्तीकै तातो चिया खाएर ढुक्कले बसेको उनले बताइन् ।
घलेले अब ओलीले निर्वाचनमा दुई तिहाइ ल्याएर देशको नेतृत्व गर्ने गरि तयारी गर्नु पर्ने सुझाव दिएकी छिन् । ओलीलाई दुइ तिहाइ देउ भेनेर आफुले भगवान सँग प्राथनानै गरेको बताउँदै उनले नारायणी किनारमा मान्छे उत्रिएको देख्दा पक्कै दुई तिहाइ आउँछ जस्तो लागेको बताइन ।
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राजा महेन्द्र पछिको राष्ट्रवादी र विकासप्रेमी नेता भन्ने घलले ओली सँग आज सम्म आफ्नो प्रत्यक्ष देखभेट भने कहिल्यै नभएको बताइन् । ओलीलाई मैले नजिक बाट प्रत्यक्ष देखेको पनि छैन कुरा भएको पनी छैन टिभीमा मात्रै देखेको हो उसको कामलेनै मेरो मन जित्यो । घलेले भनिन् ।
Last Updated on: December 3rd, 2021 at 6:19 am